5 Ekuzvidzivirira Matipi evashandisi veWiricheya
Kuzvibvuma kana kusadavira, vanoshandisa mawiricheya kazhinji kazhinji vanogona kuzviwana vamene vamene chipfuro chamatsotsi. Vanoshandisa mawiricheya havafambidzani sezvinoita dzimwe mbavha dzinobira, asi haufanire kukundwa nekutya kana uri muwiricheya. Iwo maitiro ekuzvidzivirira ari pasi apa achapa dziviriro kubva kune vanorwisa.
Wheel chair yako chombo chako
Matsotsi mazhinji anotenda zvenhema kuti vanoshandisa mawiricheya vanhu vangonangwa nyore. Asi wiricheya yako inogona kushandiswa sechombo. Mbavha hadzizvione saizvozvo zvinova zvinobatsira kwauri uye unogona kushamisa munhu anenge akurwisa zviri nyore. Kungosunda wiricheya yako mberi nekuarovera mukati mezvidya zvakakwana kuvaparira kurwadziwa kukuru. Vazhinji vavo vanowira mberi uye unogona kukurumidza kuvabaya mumhino, mumaziso kana pahuro.
Tora Pepper Mwaya
Pepper spray inowanikwa online pamutengo unonzwisisika. Dzimwe idiki diki zvekuti dzinogona kusunganidzwa nechainokiya. Kunyangwe iine dzimwe dzese nzira dzekuzvidzivirira dzave pedyo, kumisa wako anorwisa munzira yavo nepepuru spray kuchakupa nguva yekutizira kwakachengeteka.
Blast Yako Yega Alarm
Unogona kubatanidza muridzo wemagetsi munzvimbo iri nyore pawiricheya yako zviri nyore kufambidzana. Kungo bata kumwe chete kunoridza alamu inonzwika iyo inogona kunzwika kure kure. Ruzha runotumira wako anorwisa achimhanya neimwe nzira. Aramu inoshanda zvakanyanya sezvo anorwisa ari kuuya kwauri. Ivo vachatiza sezvo ivo vasingade chero isingadiwe kutariswa.
Shandisa Stun Pfuti
Pfuti dzakarohwa hadzisi pamutemo pese pese, iva nechokwadi chekuziva mitemo yako yekwaunogara uye teerera iyo mitemo kana uchinge wakatakura mudziyo uyu. Pfuti inokatyamadza inopa munhu anokurwisa kuvhunduka kwemagetsi kunomumisa ipapo ipapo. Iwo madiki uye unogona nyore kutakura imwe paunenge wakatasva wiricheya yako.
Kana munhu anorwisa akauya kwauri akatungamira mberi, vanogara vachisiya mabvi avo ari pachena. Mabvi inzvimbo yakaoma kwazvo yemuviri uye whack yakanaka ine chinhu chakaomarara inokonzera kurwadziwa kwakanyanya. Iwe unoda kuvarova nenzira iyo mabvi avo achidzokera kumashure, kutyora kana zvichibvira. Nekuda kweizvozvo, anorwisa wako haazokwanisa kufamba uye iwe unogona kutizira kwakachengeteka uye kutsvaga rubatsiro.